एनआरएनएमा पूर्व अध्यक्षहरुनै संस्थापनसँग असन्तुष्ट : "बिधान विपरीत अघि बढन खोज्नु दुर्भाग्य" - Himalayamail.com
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) संस्थापन पक्ष एकलौटी ढंगले बिशेष महाधिवेशन गर्न लागेपछि संस्थाको भविष्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)का पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुलाई बाईपास गरि संघ अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा.हेमराज शर्मा एकपक्षीय ढंगले अघि बढेपछि संस्थाको भविष्य माथि चिन्ता र अड्कलबाजी हुन थालेको हो ।
आगामी जनवरी २३ र २४ मा हुन लागेको बिशेष अधिवेशनमा एकपक्षीय ढंगले महासचिव शर्माले गत नवौं महाधिवेशनमा भाग नलिएका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने सुचना सामाजिक संजाल मार्फत जारी गरेपछि पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरुको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का तीन पुर्व अध्यक्षहरुले उक्त कदमको शालीन रुपमा असहमती ब्यक्त गर्दै विरोध गरेका छन । पुर्व अध्यक्षत्रय शेष घले, देवमान हिराचन र भवन भट्टले कोभिड-१९ महामारीमा काम गर्ने बेलामा गरिने विशेष महाधिवेशनमा अत्यावश्यक दुई प्रस्ताब बाहेक अन्य काम नगर्न सुझाब दिएका छन । दुई कार्यकाल एनआरएनएका नेतृत्व सम्हालेका पुर्व अध्यक्ष घलेले कोभिडका मारमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न संघ नेतृत्वलाई आग्रह गरिसकेका छन । प्राय: कम बोल्ने स्वभावका घलेले विधान संशोधन प्राथमिकताको बिषय नरहेको जनाउदै गैरआवासीय नेपालीलाई कोभिडका बारेमा सचेतना जगाउन लाग्ने पर्ने समय आएको सुझाए ।
पुर्वअध्यक्ष हिराचनले महाधिवेशन जस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने बिषय भर्चुअल प्रविधि मार्फत भन्दा काठमाण्डौं हुने सम्मेलनमा गर्न सुझाब दिएका छन । उनले अनलाइन मार्फत गरिने अधिवेशनमा गत बर्ष पारित हुन नसकेका प्रस्ताव मात्र गर्न सुझाएको इमेल संघ नेतृत्वलाई पठाएका छन । ‘विधान संशोधनका बिषयहरु महामारीको बेला हतारिएर गर्नु हुदैन,’ इमेलमा उनले प्रस्टसँग भनेका छन्।
निबर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले त संघको वर्तमान नेतृत्वले गर्नैपर्ने काम छाडेर नगरेपनि हुने काममा चासो बढाएको बताएका छन् । नयाँ बर्षमा एक अन्लाइन्द्वार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उनले भने-” एनआरएनमाथि अहिले थुप्रै चुनौती छन्, तर संघको प्राथमिकतामा भने अर्कै विषय छन् ।”
भट्टले एनआरएनएले यसका एनसीसीहरुलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाउन खोजिरहेको बताए । ‘एनसीसीहरुसँग धेरै जिम्मेवारी छ, त्यसैले कमजोर नबनाऔं,’ उनले भने ।
आफ्नो कार्यकालमा सफलताको उत्तरार्धमा पुर्याएको नागरिकताको विषय अहिले ओझेलमा पारिएको उनले टिप्पणी गरे । ‘एनआरएन नागरिकताको विषयमा हामीले ठूलै सफलता पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो नेतृत्वले त्यसलाई पछ्याउन नसक्दा पाएको उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा बढेको छ ।’ संघको विधानमा रहेको परम्परावादी निर्वाचन प्रक्रिया र शैलीलाई विधानबाटै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले भने विधान संशोधनका नाममा अर्कै अर्कै विषय अगाडि सारिएको भट्टले टिप्पणी गरे ।
पुर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले यसबारेमा औपचारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् । समाचार स्रोतका अनुसार अदालतमा मुद्दा पर्याे भने संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले औपचारिक रुपमा कुरा राख्नेछन। स्रोतको दाबी छ – महतो पनि बिशेष अधिबेशनमा बिधान संशोधन गर्ने र नयाँ प्रतिनिधि ल्याउने लगायतका कुरामा असन्तुस्ट छन्।
बिधान विपरीत अघि बढन खोज्नु दुर्भाग्य : सल्लाहकार आचार्य
यसैबीच संघका सल्लाहकार कुल आचार्यले कोरोना महामारीमा बेला वेमौसमी बाजा नबझाउन नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । उनले जवर्जस्ति संस्थापन अघि बढे दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी समेत इमेल मार्फत दिएको एनआरएनए स्रोतले बतायो । संघ अध्यक्ष कुमार पन्त बस्ने जर्मनी र महासचिव डा. हेमराज शर्मा बसोबास गर्ने बेलायतमा कोरोना महामारीका कारण दुवै देश लकडाउनको अवस्थामा छ । संभवत २३ र २४ जनवरीमा विशेष अधिवेशन हुदाँ दुवै मुलुक लकडाउनमै रहनेछन । बेलायत र जर्मनीका कोभिड संक्रमितको सख्या ह्वात्तै बढेपछि लकडाउन गरिएको छ ।
संघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका सल्लाहकार आचार्यले कोरोना महामारीको मौका छोपेर नेतृत्वले संस्थाको मेरुदण्डमा नै प्रहार गर्न थालेको भन्दै नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । नवौं महाधिवेशनको म्याण्डेट र विधान विपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशनका अजेण्डा तयार पारी केही व्यक्तिहरुको इच्छा अनुसार संघलाई चलाउन खोज्नु विधान विपरीत कार्य भएको जनाएका छन । युरोपबाट संचालित अनलाईन पत्रिका नेपाली नेपाली डटकमलाई दिएको भिडियो अन्तर्वार्तामा पूर्वउपाध्यक्ष आचार्यले भनेका छन्, ‘संगठनको मेरुदण्ड भनेको विधान हो, कोरोना महामारीको मौका छोपेर केही व्यक्तिहरुले यो मेरुदण्डमा प्रहार गर्न खोजेका छन् ।’
आचार्य अक्टोबर २०१९ मा सम्पन्न संघको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए । संस्थालाई सुधार गर्दै आधुनिक, प्रविधिमैत्री र थप लोकप्रिय बनाउने काममा कसैको पनि अबरोध नरहने उनले स्पष्ट पारे । आचार्यले रचनात्मक काममा आफ्नो सधैं सहयोग र समर्थन रहेपनि संगठनलाई आधुनिक बनाउने नाममा विधानमा भएको व्यवस्था र प्रक्रिया भने कसैले पनि मिच्न नपाउने बताए ।
‘हाम्रो असहमति प्रक्रियामा हो,’ उनले भने, ‘जब प्रक्रिया नै गलत अपनाइन्छ भने त्यसबाट सही नतिजा आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।’ संघ सल्लाहकार आचार्यले महामारीको यो समयमा विशेष अधिवेशन गरिनु र विधि तथा प्रक्रिया पनि नअपनाउनु नै नेतृत्वको मुख्य कमजोरी रहेको औंल्याए । ‘जबरजस्ति गर्न खोजिए दुर्घटना हुन सक्छ,’ आचार्यले थपे । विशेष अधिवेशनमा विधान संशोधनको मुद्धा पनि समावेश गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै आचार्यले विना परामर्र्श र प्रक्रिया विधान संशोधनको एजेण्डा आउन नसक्ने बताए ।
विधान मस्यौदा समिति कसले बनायो ? उनको प्रश्न छ । संस्थालाई राजनीतिमुक्त बनाउने नाममा चरम राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरुलाई विधानको मस्यौदा तयार पार्न दिनु कुन मनसाय हो ?उनले प्रश्न गरे । आइसिसीका ६६ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको असहमति आइरहेका बेला केही पदाधिकारीले मात्रै बलजफ्ति गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
विधान संशोधनका नाममा संघको एनसीसीहरुको स्वायत्तता पनि खोस्न खोजिएको उनको तर्क छ । हामी कस्तो अभ्यास गर्दै छौं ? उनले प्र्रश्न गर्दै भने, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)हरुलाई थप स्वायत्त बनाउनुपर्ने अवस्थामा हामी केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने कोशिष गर्दैछौं ।,
विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन तथा प्रक्रियामा पनि झेल गरिएको उनले बताए । नवौं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि मात्रै विशेष अधिवेशनका सहभागी हुन सक्छन्, तर, अहिले त नयाँ सदस्य बनाउँदै प्रतिनिधिका रुपमा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ, उनले भने, नयाँ सदस्यहरुलाई विशेष अधिवेशनमा सहभागी गराउने हो भने निर्वाचन पनि गराउनु पर्यो नि ।
सधैं सहमतिबाट अगाडि बढ्ने परम्परालाई पनि यसपाली लत्याइएको आचार्यले बताए । बैठकमा निणर्य नैै नभई निणर्य भयो भन्ने क्रम बढेको भन्दै उनले समिति भित्रै पनि सहमति गराउन नसक्नेले असी लाख गैरआवासीय नेपालीहरुको हित गर्छन् भनेर कल्पना गर्न पनि नसकिने बताए ।
जुममार्फत विशेष अधिवेशन गर्ने, नयाँ सदस्यहरुलाई पनि प्रतिनिधिका रुपमा दर्ता गर्ने, समिति भित्रै उठेका असहमतिको सम्बोधन नगर्ने तथा प्रतिनिधिको नाम दर्ता गर्ने म्याद कुनै एक व्यक्तिले आफ्नो तजविजमा निर्धारण गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले सबैभन्दा पहिले कार्य समिति भित्रै निणर्य गराई आउन सुझाब दिए।
बलजफ्ति रुपमा अधिवेशन गरे त्यो अधिवेशन कागजी अधिवेशन मात्रै हुने र कालान्तरमा सिंगो संस्थालाई नै हानी हुने उनले बताए । आचार्यले ‘आफँुले आफैंँलाई मूल्यांकन गर्न’ नेतृत्वलाई सुझाब दिए ।’
संघको नेतृत्वले गर्नै पर्ने काम नगरेर नगरे पनि हुने काममा चासो राखेको आरोप लगाए । ‘नेपालमा भूकम्प गएको बेला संगठनले कति काम गर्यो, त्यस्तै अवसर यो कार्य समितिलाई महामारीले दिएको थियो’, उनले भने, ‘तर, महामारीमा पीडित भएका हाम्रा सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नबाट नेतृत्व चुक्यो । घरमै बसीबसी गर्न सकिने काम पनि यसपाली भएन।’